Gịnị bụ Ahụike Ahịa? | Martech Zone
Gịnị bụ Ahụike Ahịa?
Tọzdee, Disemba 4, 2018 Friday, December 7, 2018 Ashley Walsh
Mgbe ị banyere n'ihe mberede ụgbọ ala, daa ma ọ bụ nwee ụdị mmerụ ahụ ọzọ, ihe ikpeazụ ị nwere ike iche bụ nke ụlọ mberede nke ịchọrọ ịga leta dabere na azụmahịa ikpeazụ, akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ akwụkwọ ozi email ị hụrụ. . Ulo ahia a adighi etinye aka n'oge ihe mberede.
Agbanyeghị, ịre ahịa ahụike karịrị ngalaba azụmaahịa mberede yana ngalaba nlekọta kpụ ọkụ n'ọnụ. Lọ ọgwụ, ụlọ ọgwụ na-ahụ maka ahụike ngwa ngwa, yana ebe ọdịmma dị mma bụ ọrụ maka ịkwalite ọrụ dịgasị iche iche na-egosipụta azụ ahịa ahụ.
Ọ bụ ezie na ịzụ ahịa ahụike yiri ụdị ahịa ọdịnala ndị ọzọ, ka anyị lelee ụfọdụ akụkụ pụrụ iche nke azụmaahịa na ụlọ ọrụ a:
Ihe Omume na mmemme
New data si Ọrụ Moody's Investors Service egosiputara nnukwute nnabata nke ulo ogwu na aru oru ego. Akụkọ Moody na-agbada site na pasentị 9.5 na 2016 rue 8.1 na 2017 - ọnụọgụ a na-enwetụbeghị ụdị nke ikpeazụ ahụ n'oge nsogbu ego 2008. Onu ogugu di ka nke a adighi adi nma maka ogha n’iru oge di anya, nke a kpatara na ndi isi ulo ogwu na acho uzo ozo ha gh’enweta.
Fọdụ ụlọ ọgwụ na-eweta ego site na mmemme ahụike na mmemme pụrụ iche na mbọ dechapụ ọghọm ná ngalaba ndị ọzọ. Mmemme ahụike adịghị enyere aka igbochi mmerụ ahụ na ọrịa, mana dịka Medical Fitness Association si kwuo, ha na-enwetakwa oke ntinye aka dị ka 30 percent. Ihe omume puru iche nwere ike buru uzo esi enweta ego. Na 2017 naanị, Hosplọ Ọrụ Ntanetị Childrenmụaka bulitere ihe karịrị nde $ 38 site na netwọk kwa afọ Dance Marathon.
Dị ka azụmahịa ọ bụla, aha dị oke mkpa iji dọta ọ bụghị naanị ndị ọrịa kamakwa ikike kachasị elu. Saịtị nyocha ndị ahịa, dịka Yelp, nwetara ewu ewu n'etiti 2000s ma na-adọta ugbu a nde ndị ọrụ kwa ụbọchị. Ahụ ike, na-eduga na ebe nrụọrụ weebụ nyochaa ahụike, anọwo na ihe karịrị afọ 20 na-enyere ndị ọrịa aka ịchọta ndị na-enye ọrụ dị elu na ụlọ ọgwụ.
N'iburu n'uche usoro nlekọta ego dị oke ọnụ na-enye ndị ọrịa ikike ịchịkwa onye na-enye ha nhọrọ, ọrụ ndị na-ere ahịa ahụike maka ire ahịa akara ha abawanyela nke ọma. Otu ụzọ ndị ahịa ahụike na-ere ngwa ngwa nwere ike isi mee nzaghachi ndidi iji rụọ ọrụ nke ọma bụ itinye ego aha njikwa software iji chọpụta mmejọ nke netwọkụ ha. Nke a na - eme ka ọ dị mfe idozi mkpesa ozugbo enwere ike, yana na - arịwanye elu na nkwupụta dị mma sitere n'aka ndị ọrịa. Ọ bụrụ na nyocha ndị na-adịghị mma bụ nchegbu, jikwa ike nke nyocha afọ ojuju nke onye ọrịa iji chọpụta nsogbu n'oge, tupu ha abanye na saịtị ọha na eze dị ka Healthgrades.
Kacha ọhụrụ na Ahụike Teknụzụ
Anyị maara na ndị na-azụ ahịa na-achọ nkà na ụzụ kachasị ọhụrụ. Nke a nwere ike bụrụ eziokwu karịa gbasara ahụike. Ndị ahịa nwere ike ịdị mma na ịnweta iPhone nke bụ ọgbọ ole na ole ochie nwere ihuenyo gbawara agbawa, mana ha agaghị enwe obi ụtọ ma ọ bụrụ na nyocha ụbụrụ ha kachasị ọhụrụ mere na nyocha MRI na steeti yiri ya.
Isi Iyi: Npr
Na nzaghachi, ndị ahịa ahụike na-elekwasị anya n'ịga n'ihu na teknụzụ ahịa dị ka ụzọ isi mepụta ọdịiche ahịa.
O yikarịrị ka anyị ga-anọgide na-ahụ ịwa ahụ ndị ọzọ na-enyere aka na robot na mmemme AI-abawanye na afọ ndị na-abịanụ. Ọmụmaatụ, a na-amụ nke Schoollọ Akwụkwọ Ọgwụ Mahadum Stanford na-eduzi hụrụ nrịba nke ịwa ahụ akụrụ aka na-enyere aka na robot site na 1.5 pasent rụrụ na 2003 ruo 27 pasent na 2015.
Dika ochicho nke ogugu ohuru ohuru na ebili, ndi na ere ahia banyere ahuike na aru oru ha na ndi isi ulo oru iji choputa ndi iche iche di iche na ozi di nkpa na kwa onwa na kwa afo.
mgbe nlekọta ahụike yiri ụdị ahịa ahịa ọdịnala, ọ na-eweta echiche pụrụ iche ya na tebụl. Site na itinye ihe omume na ihe omume, na-elekwasị anya na njikwa aha na ịkọwapụta na teknụzụ kachasị ọhụrụ, azụmaahịa ahụike na-ewulite mmata banyere ọtụtụ ọrụ.
Tags: nlekọta ahụikeahụike twitternlekọta ahụike twitterahụikemarketingnjikwa ahaNyochaKedu ihe bụ ahịa ahụike
Ashley bụ VP nke Marketing na Mpempe akwụkwọ, Indianapolis dabeere ụdị ụlọ na data weghara software ngwanrọ. Tupu Formstack, Ashley nọrọ afọ 8 na ndepụta Angie na-ejide ọnọdụ na azụmaahịa, ngwaahịa na arụmọrụ.